के कडा परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक सिद्धान्तको जमाना गइसक्यो?
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | आफ्नो काममा कसरी रमाउन सक्नुहुन्छ?
के कडा परिश्रम गर्ने जमाना गइसक्यो?
सामान ओसारपसार गरिदिने एउटा कम्पनीमा काम गर्ने एलेक्स ट्रकमा बाकस राख्दै छन्‌। तिनी सुस्केरा हाल्दै मनमनै सोच्छन्‌, ‘यो काम गरेर उँभो लागिएला जस्तो छैन। म कहिले सफल हुने? कामै गर्नु नपरे जीवन कत्ति रमाइलो हुन्थ्यो!’
एलेक्सजस्तै आज संसारमा थुप्रै मानिस कडा परिश्रम गर्न रुचाउँदैनन्‌। गाडी मर्मतको काम गर्ने आरोन यसो भन्छन्‌: “धेरैजसो मानिसहरू ‘निम्न स्तरको’ ठानिने काम आफ्नो लायकको छैन भनेर सोच्छन्‌। तिनीहरू भन्छन्‌: ‘म त राम्रो काम पाउनेबित्तिकै यो काम छोडिहाल्छु।’”
धेरै मानिसहरू कडा परिश्रम गर्न किन मन पराउँदैनन्‌? अक्सर सञ्चार माध्यममा “आदर्श” जीवन भनेको ऐस आरामको जिन्दगी हो भनेर देखाइन्छ। यही कुराले नै तिनीहरूको सोचाइलाई प्रभाव पारेको हुन सक्छ। मर्मतसम्भारको काम गर्ने मेथ्यु यसो भन्छन्‌: “जीविकोपार्जन गर्न तपाईंले कडा परिश्रम गर्नुपरेको छ भने तपाईं सफल हुनुहुन्न भनेर मानिसहरू सोच्छन्‌।” घरको रेखदेखको काम गर्ने शेन पनि यो कुरामा सहमत छन्‌। तिनी भन्छन्‌: “आजकालका मानिसहरू थोरै परिश्रम गरेर धेरै पैसा कमाउन चाहन्छन्‌।”
अर्कोतर्फ थुप्रै सफल व्यक्तिहरू कडा परिश्रम गर्न मन पराउँछन्‌। निर्माणकार्यमा काम गर्ने २५ वर्षे डानियल यसो भन्छन्‌: “काममा कडा मेहनत गर्नेले इनाम पाउँछ। विशेषगरि, अर्थपूर्ण उद्देश्यले गर्दै छ भने।” तेइस वर्षे आन्ड्रे पनि यसो भन्छन्‌: “मेरो विचारमा हामी जीवनमा कति आनन्दित हुन्छौं, त्यो कुरा हाम्रो काममा पनि भर पर्छ। थोरै मात्र काम गर्ने वा कम परिश्रम गर्छौं भने केही समयको लागि त रमाइलो होला, तर लामो समयपछि भने हामीलाई दिक्क लाग्न सक्छ।”
डानियल र आन्ड्रेजस्ता मानिसहरूले कसरी कडा परिश्रमलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न सिके? तिनीहरूले बाइबलबाट सिकेका सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो व्यवहारमा उतारे। बाइबलले अल्छी हुन सिकाउँदैन, बरु कडा परिश्रम गर्न र लगनशील हुन प्रोत्साहन दिन्छ। तर बाइबलले हामीलाई काम गर्नुपर्छ भनेर मात्र सिकाउँदैन। यसले हामीलाई आफ्नो काममा कसरी रमाउने भनेर पनि सिकाउँछ।
बाइबलका कुन सिद्धान्तहरूले तपाईंलाई आफ्नो काममा सन्तुष्ट हुन मदत गर्छ? कृपया यसपछिको लेखमा बाइबलका केही सिद्धान्तबारे पढ्नुहोस्।
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा फेब्रुअरी २०१५ | काममा कसरी रमाउन सक्नुहुन्छ?